URamaphosa uthi amabhizinisi ngeke aphazamise umsebenzi we-ANC | Isolezwe
URamaphosa uthi amabhizinisi ngeke aphazamise umsebenzi we-ANC
Isolezwe / 20 December 2012, 2:16pm /
IPHINI likaMengameli we-ANC elisanda kuqokwa uMnuz Cyril Ramaphosa (osesithombeni) uthi ulucubungulisise kahle udaba lwamabhizinisi akhe ukuze agweme ukushayisana phakathi komsebenzi wakhe omusha kwi ANC nowamabhizinisi. URamaphosa uthi amabhizinisi angeke amphazamise nakancane kwizinselelo zakhe ezintsha.
“Emuva komphumela wokhetho wokuqokwa kwami kulesi sikhundla engqungqutheleni ye-ANC ka 53 eMangaung, ngibe sengiqala ukucubungula umsebenzi wami wamabhizinisi,” kusho uRamaphosa esitatimendeni.
Uthi lokho bekubalulekile ukuze kungabi khona ukushayisana, futhi enze nesiqiniseko sokuthi uwenza kahle umsebenzi aqokelwe kuwo. Uveze ukuthi uyaxhumana ne-ANC ngamanye amabhizinisi akhe nomsebenzi wonke wamabhizinisi.
“Okwamanje ngixhumana nabo bonke abathintekayo ngokubheka ukuthi imuphi umthelela ongaba khona ngesikhundla sami esisha, lokhu kuhlanganisa ukubheka izikhundla engikuzo njengamanje, umsebenzi enginawo kanye nengisamele ngiwenze. Konke lokhu kuzokwenza ukuthi kube nohlelo lokususa konke okungaba ukushayisana kwamabhizinisi nesikhathi esisha kwi ANC,” kuchaza uRamaphosa.
Uthe ezinye izitatimende uzozikhipha ngokuqhubeka kwesikhathi. URamaphosa wasula ezikhundleni zepolitiki ngo 1997, wangena kwezamabhizinisi waqala inkampani iShanduka Holdings. Uphinde abe nguSihlalo weBidvest Group Limited ne MTN, uphinde abe namasheya ezitolo ezidayisa ama-burger athandwayo akwa- McDonald’s. Ezinye izikhundla anazo ezokuba nguMqondisi wakwa Macsteel Holdings, Alexander Forbes, Standard Bank nakwa-SAB Miller.